भारतका हरेक सानो ठुलो शहरमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीको दिनलाई गणेश चतुर्थीको रुपमा भव्य रुपमा मनाईन्छ । भन्नलाई भाद्र शुक्ल चतुर्थीको दिनलाई गणेश चतुर्थीको भनेपनि यो धार्मीक पर्वको रमझम भने करिव १५-२० दिन सम्म रहन्छ ।
बुद्दी, ज्ञान र धनका समेत देवता मानिने भगावान गणेशको यो पर्वको हलचल यो पर्व सुरुहुने १-२ हप्ता अगाडि देखिनै देखीन थाल्छ । शहर-गाउँ सबैतिर, माटो वा अन्य विभिन्न चिजबाट बनेका गणेशका मुर्तिहरुको बेचबिखनमा सबै व्यस्त हुन्छन् । घर, चोक, टोल वा कार्यालयहरुमा समेत स्थान र खर्चका हिसाबले १०-१५ फिट अग्लो देखी साना साना मूर्तीहरु समेतको जोहो हुन्छ ।
घर-घरमा साना-तिना मूर्ति त टोल-टोल र चोक-चोकमा भने पाण्डाल (अस्थाई मन्दिर) बनाएर त्यहा गणेशको मूर्ति स्थापना गरेर पूजिन्छ ।
केहि दिनको पूजा पछि भने ति सबै मूर्तिलाई नजिकैको नदि, खोला वा ताल आदिमा लगेर बिसर्जन गरिन्छ । मूर्ति स्थापना निर्दिष्ट दिनमै गरिए पनि बिसर्जन भने आ-आफ्ना सुबिधाको हिसाबमा गरिने भएकोले गणेश चतुर्थी समापन भएको हप्ता-दस दिन सम्म पनि यो मूर्ति बिसर्जनको कार्यक्रम भने चली रहन्छ ।
मूर्तिको स्थापना जत्ती आकर्षक हुन्छ, बाजा-गाजा र हर्षोल्लासका साथ “गणपति बप्पा, मोरीया” को धुन गुन्जाएर गरीने बिसर्जन पनि त्यत्तीकै आकर्षक र हेर्न लायक हुन्छन् ।
आजको यो पोष्टमा गणेश चतुर्थीको अगि र पछिका यस्तै केही तस्विरहरु :
(पर्व अगाडिको तयारी—बिक्रिका लागी राखिएका गणेशकका ठुला मूर्तिहरु)
(घरको लागि मूर्ति जुटाउन बजारमा चहलपहल)
(मेरो घरको करिब २०० मिटर वरिपरी यस्ता करिब १० वटा पाण्डाल राखिएका थिए)
(यो घर नजिकैको अर्को पाण्डालमा स्थापना गरिएको सेतो गणेश)
(र यो अर्को पाण्डालमा राखिएको गणेश)
(पर्व पनि मनाउँदै, विज्ञापन पनि गर्दै—एउटा डिपार्टमेण्ट स्टोरमा राखीएको झिल्के गणेश)
(मूर्ति विसर्जनको लागी लगिदै)
(मूर्ति बिसर्जन गरिँदै)
म बस्ने शहर नजिकै खोला, नदि नभएकाले यहाँका अधीकांश मूर्तिहरुलाई यहाँको हुसेन सागरमै बिसर्जन गरिन्छ –साना मूर्तिहरु तालको किनारबाट पानिमा हालिन्छ भने केहि ठुला मूर्तिका लागि यस्तै क्रेनको जरुरत पर्छ।
Posted by Sujan Sharma 21 comments/ टिप्पणी
विगत केही समय देखी भारतमा स्वाईन फ्लू (H1N1 virus) को हल्ला र खवर कहीले हराएजस्तो त कहीले झनै गम्भिर भएजस्तो गरी आईरहेको छ ।
केही समय अगाडि, महाराष्ट्रमा त यसको रोकथामको लागि सात दिनकोलागि स्कूल कलेज समेत बन्द गरीए । अघिल्लो हप्ता पत्रिकामा स्वाईन फ्लु ‘कन्ट्रोलमा आएको’ खवर छापिएको थियो । तर आजको पत्रिकाको खवरलाई आधिकारीक मान्ने हो भने हालसम्म भारतमा ४८ जनाले यही रोगका कारण ज्यान गुमाई सकेका छन भने हिजों पहिचान गरीएका १३८ जना नयाँ समेत गरी संक्रमीतको संख्या २५३९ भएको छ ।
अलिकता हल्ला, अलिकता तथ्य, अनि केही गफ गर्ने बहाना त केही नजानिदों डर सबै समान छाएको छ यतातिर । स्कूल-कलेज, कार्यालय वा सामाजिक जमघट सबैमा यसको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
कसैलाई यो त्रासको विषय भएको छ भने कत्तीलाई कमाउने सिजन पनि । हाल शहरको ठाउँ-ठाउँमा ‘स्वाईन फ्लू प्रिभेन्टीभ मेडिसीन’ र ‘मास्क’ को बजार गर्माएको छ । आजको पोष्टमा यही स्वाईन फ्लू सम्बन्धि केही तस्विरहरु:
( स्वाईन फ्लू को सन्त्राश संगै मौलाएको औषधी ब्यापार)
(औषधी पसले मात्र होईन, खुद्रा पसले समेत मौकाको फाईदा उठाउँदै छन् ।)
(घर बन्नै बाँकी छ, ब्यापार सुरु भै सक्यो !)
(यो चाँही आफ्नै छोरी---मास्क लगाएर मात्रै स्कुल आउन नोटिस आएकोले मास्क सहित स्कुल बसको प्रतिक्षामा)
(यहाँका स्कुलहरुमा स्वाईन फ्लूको रोकथामको लागि औषधी दिईदै)
(स्वाईन फ्लूको सन्त्राशले गर्दा पछाडी “Wine” आउने सबै शब्द “Swine” जस्तै लाग्न थालेछ—यो चाँही “Wine” लाई “Swine” देखेर झुक्केर खिचेको तस्बिर हो है !!)
Posted by Sujan Sharma 14 comments/ टिप्पणी
पहिला रजतपटलको सफल अत्यन्त लोकप्रिय नायक र पछि राजनीतिमा सफल नेताका रुपमा प्रसिद्ध रहेका N.T. Rama Rao ( जो आन्ध्र प्रदेशमा मुख्य मन्त्री समेत रहेका थिए) को सम्झनामा हैदराबादको हुसेन सागरको छेउमा एउटा उद्यान निर्माण गरिएको छ ।
सुन्दर फुलहरु कलात्मक प्रवेश द्वार र स्मारक अनि शान्तिपूर्ण वातावरणका कारण सो उद्यान सहरमा निकै मनोरम र भ्रमणयोग्य स्थानको रुपमा गनिन्छ । पुरै आन्ध्र प्रदेशमा यि नेता र अभिनेताको नामबाट विभिन्न पार्कहरु र अन्य विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरु पनि बनेका छन । यिनको नामबाट बनेको एउटा पार्कको बारेमा मेरो यो पोष्ट मा पनि केही कुराहरु छन । आज भने यिनको सम्झना र सम्मानमा बनाईएको स्मारक वरिपरिका केही सुन्दर दृश्यहरु :
(मुख्य प्रवेश द्वार-यहाँ देखिनै पुरै स्मारक क्षेत्रमा जुत्ता,चप्पल निषेध छ)
(आगन्तुक को स्वागतमा कलात्मक मुर्ति)
(मुख्य स्मारक सम्म पुग्ने कलात्मक मार्ग)
(स्मारक परिसरको शान्त बगैचा)
(केही पर बाट खिचिएको स्मारकको दृश्य)
Posted by Sujan Sharma 10 comments/ टिप्पणी
Posted by Sujan Sharma 13 comments/ टिप्पणी